Guuleed oo DF u jeediyey codsi la xiriira Somaliland - Caasimada Online
Home Somaliland Guuleed oo DF u jeediyey codsi la xiriira Somaliland
Guuleed oo DF u jeediyey codsi la xiriira Somaliland
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynihii hore ee Galmudug, soona noqday Wasiir ka tirsan xukuumadii hore ee Soomaaliya, Cabdikariin Xuseen Guuleed, ayaa ka hadlay xuska 18-May, oo ku beegan xiligii ay Somaliland ku dhawaaqday madax-banaanida.
Cabdikariin ayaa Somaliland ku bogaadiyay guulaha ay ka gaadheen dhanka amaanka iyo weliba horumarka, isagoona dowladda federaalka ku eedeyay inay gebi ahaanba ku fashilmatay soo xero galinta Somaliland.
Madaxweynihii hore ee Galmudug, Cabdikariin ayaa arrinkaasi kaga hadlay qoraal dheer oo uu soo dhigay bartiisa Facebook, kaasi oo ku sheegay inaysan dhaceyn qaranimo dhameystiran inta ay maqantahay Somaliland, oo iyadu ku doodaysa inay tahay dal ka madax banaan Soomaaliya.
Wuxuuna usoo jeediyay dowladda federaalka inay dar-dar xoogan geliso wada-hadalada labada dhinac, xili ay socdaan qorshayaal cusub oo dowladaha Itoobiya iyo Mareykanku ku wajahayaan wada-hadalkaasi.
Maanta 29 sano ayaa laga joogaa markii ay walaalaha reer Soomaliland iclaamiyeen gooni isu-taag dhankooda ah. Dhalaankii maalinkaas dhashay, hada waa masuul iyo aqoonyahan talada qeyb ka ah. Haddaba si jiilka noocaas ah loogu qanciyo wadajirka iyo midnimadda Soomaaliya waa arrin u baahan qorshe weyn, faham caafimaad qaba, qirrasho sugan, dad ku dhacleh iyo tanaasul siyaasadeed.